Uyaphi kwaye wenze ntoni?
Mhlawumbi uqhelene namagama u-Itaewon, Myeongdong okanye u-Hongdae, kodwa ngaba uyazi ukuba loluphi uhlobo lwezinto onokuzenza kwezi ndawo? Uya kufumana kule nkcazo yebhlog kunye nemisebenzi yeyona ndawo idume kakhulu neshushu eSeoul! Ke ngoko, nokuba ukuhlala kwakho eSeoul kukufutshane, unokukhetha ukuba zeziphi iindawo ofuna ukuzityelela kwaye zeziphi izinto ofuna ukuzenza apho!
I-Hongdae yeyona ndawo ishushu kakhulu yabantu abatsha abatyelele eSeoul. Le ndawo yabafundi ifumaneka kufutshane neYunivesithi yaseHongik kwaye ungathatha indlela ehamba phambili, umgca 2 ukuya kundwendwela le ndawo ishushu kakhulu. Uya kufumana izinto ezininzi ezenziwayo, ukuya ezivenkileni ukuya karaoke, ukutya ukutya okumnandi kwiindawo zokutyela, ezihlala zifikeleleka kakhulu. Uninzi lwexesha, uya kufumana ithuba lokuncedisa ekuqhubeni ibhasi okanye abadanisi besenza ii-choregraphies ezimangalisayo kwiingoma ze-kpop. Le ndawo ithakazelelwa kakhulu kubakhenkethi kodwa naphakathi kwabaseKorea. Ungahamba ekukhanyeni kwemini okanye ebusuku, uyakuhlala ufumana izinto ezinomdla ongazenza.
I-Itaewon, le ndawo yeyona ndawo ishushu eSeoul nangaphezulu emva kokuphinda kudlalwe umdlalo we-Itaewon Class obuye waphumelela ngakumbi ukhenketho. I-Itaewon sisithili samazwe onke apho unokufumana iindawo zokutyela ezivela kuwo wonke umhlaba, umxube weenkcubeko kunye neenkolo. Ngokwenyani ungayifumana i-mosque yase-Seoul e-Itaewon, ijikelezwe ziivenkile kunye neendawo zokutyela. Kodwa ngaphezu kwako konke, i-Itaewon idume ngokuthatha inxaxheba kunye nokubamba iiklabhu. Inene kukho iitoni zemivalo, iiklabhu kunye neekara. Yiyo loo nto esi sithili sithandwa kangaka ngabaphambukeli nabaseKorea.
IMyeongdong Yindawo ekufanele ukuba uhambe ngayo ukuba ucwangcisa ukuya kuthenga kwaye uza nezikhumbuzo kunye nezipho zabahlobo bakho kunye nosapho. Ngokwemvelo, unokufumana yonke into oyifunayo apho nangaphezulu! Kwaye kubathandi bezithambiso yile yiparadesi yakho, kuba zingamakhulu khulu eempawu ezivela kwezona zaziwayo ukuya kwezingaziwayo. YUya kufumana yonke into oyikhangela. Kwaye eyona nxalenye yayo, kukuba kukho ukutya kwesitalato okujikelezileyo! Ungakonwabela ukuyokuthenga xa usitya izidlo zaseKorea ongazange wazama ngaphambili, njenge-Egg Bread okanye iTornado Potato.
IGangnam ngokoqobo ithetha ukuba 'emazantsi entlambo, njengoko ibekwe ezantsi kweHan River. IGangnam liziko lemfashini, iChic kunye nexesha langoku leSeoul eligcwele ziindawo zokuthenga kubandakanya ivenkile, iivenkile zokutyela kunye nabathengi. IGangnam idume kakhulu kubathandi bevenkile. Ungafumana omkhulu Iivenkile zokuthenga ezifana ne-COEX, kunye neelebheli zokuphela kwayo. Ukuba unomdla kumculo waseKorea (K-pop), ungafumana iiarhente ezininzi ze-Kpop ezinjengeBighit Entertainment, iSM Town, ukuzonwabisa kweJYP… Ubusuku basebusuku kwindawo buxakeke kakhulu kwaye bumnandi ngeeklabhu zasebusuku eziphakamileyo kunye nemivalo, yenza le ndawo ibe yindawo indawo entle yokudanisa kwaye ukonwabele ubomi kude kuse!
Umfula i-Han kunye neendawo ezijikeleze wona zikumbindi weSeoul ohlukanisa umzi wesi-2. Yindawo edumileyo yabemi belo dolophu. Le ndawo ngokuqinisekileyo iluhlobo lokuhamba okuncinci ngaphandle kwesidingo sokucwangcisa uhambo lwakho kwangaphambili. Unokuphumla kwaye unandiphe ixesha elimnandi nosapho lwakho, abahlobo kunye nabantu obathandayo kwiipaki ezahlukeneyo ezikujikelezileyo. Okwe-oAbantu abafuna unyango bafuna into engxamisekileyo ye-adrenaline, ungayonwabela imidlalo yezamanzi okanye ukukhwela ibhayisekile ecaleni komfula. Ngaphandle koko, ukuba ulambile kancinci ungakufumana ukutya kwakho kuye!
Isithili se-Insadong, kumbindi wesixeko saseSeoul, iyaziwa phakathi kwabaphambukeli kwiivenkile zayo ezahlukeneyo kunye neeresityu. Ngaphezulu kwayo yonke into iyaziwa ngokuba nezitrato zayo kunye nembali edibeneyo nembali yangoku onokuyifumana apho. Yindawo ekhethekileyo yeSeoul efuzisela okwenyani ilizwe loMzantsi Korea. Ngokujikeleza isithili se-Insadong, unokufumana amabhotwe ukusuka kwixesha likaJoseon. Ubugcisa bunendawo ebalaseleyo kwi-Insadong. Igalari ezininzi Ukubonisa zonke iintlobo zobugcisa ukusuka kumzobo wesiko ukuya kwimifanekiso eqingqiweyo inokufunyanwa kuyo yonke indawo. Kwaye emva koko, izindlu zeti zemveli kunye neeresityu ziindawo ezifanelekileyo zokugqibezela ukutyelelwa kwesi sithili ..
Ibhalwe nguSoukaina Alaoui kunye noCaillebotte Laura